Manni Murtii Oromiyaa keessa jiran qajeelfama haaraatiin akka hojjatan ajajni itti kenname. - Oromia Shall be Free
Manni Murtii Oromiyaa keessa jiran qajeelfama haaraatiin akka hojjatan ajajni itti kenname.
Xalayaa Mudde 1 bara 2015 barreeffameen akak eerametti, himannaa dhiyaatan irratti mirga wabii kan eegamu adeemsa seera yakkaa hordofuun otuu hin taane, Qajeelfama haaraa bahe kanaan ta’a. Kunoo, Qajeelfama maqaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaatiin manneen murtii Oromiyaa keessa jiraniif kenname kun kan qaamni hoji raawwachiiftuu qaama seera hiiktuu akka fedhetti ajaju ta’uu saaxila. Qajeelfamni haaraa Mana Murtii God.Sha.Lixaa, kan Amsaaluu Olaaniitiin mallatteeffamee bahe kunis akkamiin qaamni seera raawwachiisu qaama seera hiiku akka ajaju ragaa dha.
Eehee, laga gama sanaa waanti tortore foolii kennaa jira….
Previous #Oromoprotest TORONTO
Next #‎Second Round Oromo Protest To Be Continued‬